«Ligue des champions»: resin’ny Ajax ny Juventus | NewsMada
Par Taratra sur 18/04/2019
Nitranga, ny tsy nampoizina teo amin’ny lalao ampahefa-dalana miverina, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra “ligue des champions”. Nihintsana mantsy ny Juventus de Turin. Nosakanan’ny Ajax d’Amsterdam, tao amin’ny kianjany tao Turin, ny lalan-dry Ronaldo sy ny namany.
Resin’ny Holandey, tamin’ny isa, 2 no ho 1 izy ireo, ny talata lasa teo. Vokatra, tsy nisy nampoizin’ny rehetra, satria noheverina fa tsy haharesy ny Italianina, ao amin’ny kianja filalaovany ry zareo Ajax. Na izany aza, ny tompon-tanana, no nanokatra ny isa voalohany, tamin’ny alalan’i Ronaldo, teo amin’ny minitra faha-28, tamin’ny alalan’ny lohany. Nihevitra ny rehetra teo fa hisesy ny baolina ho tafiditry ny Italianina.
Nanohitra kosa nefa ny Ajax, nampiseho endri-dalao, tsara sy haavo teknika ambony, na teo amin’ny fiarovan-tena na teo amin’ny fanafihana. Tsara rindra avokoa, izay rehetra nataon’izy ireo. Nahitam-bokany izany, tany amin’ny minitra faha-34, izay nanasahalan’izy ireo, ny isa. Baolina tafiditr’i Van Den Beek. Io isa io, no nentin’ny roa tonta, niala sasatra. Nanao izay ho afany, ny Juve, teo amin’ny tapa-potoana faharoa, saingy ry zareo Ajax indray no nahafaty ny baolina faharoa, tamin’ny alalan’i De Ligt.
Teo amin’ny fihaonana ilany, nomontsanin’ny FC Barcelone, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 0 ny Manchester United, Ny baolina roa, tamin’io dia matin’i Messi, avokoa.